Ikati eliwolintshi elenziwe ngekhadibhodi | Imisebenzi yezandla ivuliwe
U-Alicia tomero | 18/04/2022 14:25 | Imisebenzi yezandla zekhadibhodi, Imisebenzi yezandla yezingane, Ubuciko nezinto zokwakha
Este ikati elincane ungumhlengi wangempela. Lo msebenzi wezandla singakwenza ngawo amakhadibhodi kanye nezingcezu ezimbalwa zokuhlanza amapayipi. Ukulandela izinyathelo kuzoba umsebenzi omncane olula futhi onqumayo ongawenza nabancane abasendlini. Lo msebenzi wezandla wenziwa nge-silicone eshisayo ukuze izingcezu zawo zinamathele ngokushesha. Ngakho-ke, kungaba yingozi kancane ngenxa yokushisa okuthathayo futhi kushise iminwe yezingane. Ukuze wenze lokhu, ungafaka i-glue efanelekayo yezandla futhi ubambe izingcezu ngokuthile ukuze zikwazi ukunamathiselwa kancane kancane. Uma unokungabaza ngezinyathelo zakhe, une ividiyo yokubonisa ukuze ungalahlekelwa imininingwane.
1 Izinto engizisebenzisele kitten:
Izinto engizisebenzisele kitten:
Ikhadibhodi eliwolintshi elinombala oqinile.
Ucezu lwekhadibhodi eliwolintshi elilula kancane nelimhlophe.
Umucu wokuhlanza amapayipi awolintshi.
Amehlo amabili epulasitiki omsebenzi wezandla.
I-silicone eshisayo nesibhamu sakho, noma ukwehluleka lokho, uhlobo oluthile lweglue ekhethekile yezobuciko.
Silungisa amakhadibhodi e-orange emnyama futhi ngosizo lombusi sidweba unxande we-8 x 21 cm. Siyinqume bese siyigoqa ukuze senze isilinda esibanzi. Sinamathisela izinhlangothi zayo nge-silicone eshisayo.
Sibeka i- ukukhanya kwe-orange cardstock kusilinda bese ubala ukuthi likhulu kangakanani ukudweba umlomo wekati, sizokwenza mahhala. Siyinqume futhi siyinamathisele. Ngendlela efanayo sizodweba indilinga encane emhlophe, Sizoyisika bese siyinamathisela.
Ngosizo lomaka omnyama sidweba amehlo namashiya. Sizopenda futhi amadevu kanye nemigqa eseceleni Ayoba ngesimo sikanxantathu.
Sinqume i- umucu omude ukwenza umsila wekati, cishe 12cm. Sinquma ukuphela komsila ukuze ukhombe. Ngomaka omnyama sipenda amanye imithende ebanzi emsileni, nhlangothi zombili zekhadibhodi. Sinamathisela umsila ngemuva komzimba wekati sishiya okusele ngaphambili.
Thatha isicoci sepayipi futhi usike izingcezu ezimbili yenza izindlebe Sizobenza bathathe izimo ezimbili ezingunxantathu futhi banamathisele phezulu nangaphakathi kweshubhu. Thatha ezinye izingcezu ezimbili zokuhlanza amapayipi bese uzisonta ukuze yenza amabhola amabili Sizowanamathisela engxenyeni engezansi yekati ukuze silingise imilenze. Futhi kanjalo nje sizoba nalekati enhle.
Ibhokisi elinamathoyizi ekati
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » Ikati eliwolintshi elenziwe ngekhadibhodi
11 Imisebenzi yezandla enamaphayinaphu asekuqaleni najabulisayo